Tantara Voajanahary. Ny Naturalis Historia, izay azontsika d
ⓘ Tantara Voajanahary. Ny Naturalis Historia, izay azontsika dikaina hoe Tantara Voajanahary aminny fiteny malagasy dia asa soratra izay mirakitra anaty volume 37 ..
Efa tany amin ny 400 000 taona lasa no nisian ny olombelona tao Gabôna. Araka ny lovantsofina dia ny Pigmea, avy eo ny vahoaka banto, no mponina voalohany tao Gabôna. Taty aoriana, rehefa tonga ny tatsambo pôrtogey tamin ny taonjato faha-15 vao nananana ny vavolombelona an-tsoratra teo amin ireo mponina amorontsiraka. Nandritra ny taonjato telo, ny fiainan ny Pôngô na Mpôngoe dia nanaraka ny onjan ny fivarotana andevo teo amin ny vahoaka amorontsitaka sy ny mpivarotra eorôpeana. Tamin ny taojato faha-19 dia naka tsikelikely an io faritra misy an i Gabôna ankehitriny io i Frantsa, nanomboka ...
Magnetotherapy dia iray aminireo fanafody tsy mahazatra. Ireo mpitsabo Magnetotherapist dia milaza fa mahay manasitrana aretina isan-karazany aminny andriamby. Ny Magnetotherapy dia heverina ho tsy ara-tsiansa aminny asa ara-pahasalamana satria maro ny fanadihadiana ara-pitsaboana dia tsy afaka naneho fahombiazana lehibe kokoa noho ny effet placebo. Magnetotherapy no lohahevitry ny tsena lehibe, tombanana ho 252 tapitrisa euro manerantany. Ny Magnetotherapy dia tsy tokony hafangaro aminny teknika fanelanelanana ara-pahasalamana mahazatra izay mampiasa sahanandriamby pulsed toy ny stimulati ...
Ny teny hoe ankehitriny indray dia manondro ny kanto sy ny architectural sekoly naorina taminny Walter Gropius sy ny mandroso eo aminny vanim-potoana 1919-1933 tao Alemaina.
Ny Sinodanny eveka momba ny tanora sy ny finoana ary ny fiantsoanAndriamanitra, izay atao hoe Sinodanny Tanora, dia fivoriam-be faha-15 ara-potoanny sinodanny Eveka, izay nitanterahina tao Vatikàna ny 3 hatraminny 28 Okitôbira 2018.
Ny PostgreSQL dia ny banky angona misokatra aminny maro ny endri-javatra. Ny fampandrosoana ny maharitra efa mihoatra ny roa taona mahery, ary dia mifototra aminny voaporofo tsara ny trano izay efa namorona mafy ny fomba fijerinny mpampiasa manerana azo antoka, angona mivadika, ary ny fampandehanana araka ny tokony ho. PostgreSQL mihazakazaka aminny lehibe rehetra rafitra miasa, ao anatinizany ny Linux, UNIX sy ny Windows. Izany dia mifanaraka aminny ASIDRA, ary izany dia ahitana indrindra SQL92 sy SQL99 angon-drakitra-karazany, anisanizany ny INTEGER, ny ISA, BOLEANINA, CHAR, VARCHAR, DAT ...
Ny fianarana ny fanatontoloana dia fianarana ambaratonga ambony mikasika ny politika, toen-karena, ny tontolo iainana ary ny fifandraisana ara-kolontsaina izay misy fiantraikany amin’izao tontolo izao. Ny fianarana ny fanatontoloana dia mahakasika sehatra isan-karazany toy ny fifandraisan’ny tsena, ny fifamoivoizan’ny entana, ny fifandraisana manerantany sy ny fanjifiana, ny mpitsoa-ponenana, ny mpifindra monina ary ny fifamoivoizan’ny olona maneran-tany. Tafiditra ao anatin’ny fianarana ny fanatontoloana ihany koa ny fifandraisana ivelan’ny firenena sy ny an-toerana satria miresaka mikasi ...
ⓘ Tantara Voajanahary
Ny Naturalis Historia, izay azontsika dikaina hoe Tantara Voajanahary aminny fiteny malagasy dia asa soratra izay mirakitra anaty volume 37 nosoratani Pliniosy Ilaibe, izay tia nanangona fampahalalana betsaka indrindra mahakasika ny kolontsaina aminny ankapobenny olom-pirenena romana izay manan-kolontsaina.
Nahatsiaro saina i Pliniosy fa fohy ny fe-potoana iainanny olombelona, ary noho izany tokony ampiasainy tsara izay fe-potoana ananany izay mba tsy hahakely ny fahafahany mianatra.
Na dia anisanny asa soratra feno indrindra avy aminny Taona latina Taloha aza io zavatra io, tsy hita ny firaketana ambonny papyru, fa singantsingan-taratasy mateza nosoratana nandritra ny taonjato fahadimy ary singan-taratasy taminny taonjato fahavalo. Ilaina niandry ny taonjato faha roa ambinny folo isika vao afaka mijery ny versiona tanteraka ary ny fanontana nataoni Nicolas Jenson ny taona 1469, izay tsy dia nisy nahalala. Nanonta azy fanindroany i Sweynheym ary Pannartz taminny 1470 avy aminny fanontani Giovanni Andrea Bussi, evekani Aleria. Ekena fa toerana nitombohanny fomba ara-tsoratra nentindrazana ilay santiôna farany teo.
Boky 1: sasin-teny, firaketan-toko ary firaketam-panoratra
Boky 2: famaritana ara-matematika ary ara-pizikanizao tontolo izao
Boky 7: haiolombelona ary fiziôlojianolombelona
Boky 3-6: jeôgafia ary haifombam-poko
Boky 8 - 11: haibiby
Boky 12 - 27: Haizavamaniry izay ahitana ny voly ary ny haivolim-boninkazo
Fatotra fahaefatra hatraminny fahafito
Boky 28 - 32
Boky 33 - 37: fitrandrahana ny mineralinny any ary haivato.
Fatotra fahasivy ary fahafolo
Wikipedia: Tantara Voajanahary